BRIGHTON မှလန်ဒန်ဗစ်တိုးရီးယားအထိအမြင့်ဆုံးရထားများကိုဖျက်လိုက်သည် - သတင်း
Southern Rail သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ Brighton သို့ London service များကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတစ်နေ့လျှင်အများဆုံးအမြန်ဆုံးရထားတစ်စီးသာရှိသည်။ Gatwick သည် London Victoria သို့ Thames Link သို့ပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ် London Bridge သို့ Thames Link သို့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောရရှိနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများဖြစ်ပြီးရထားလျှော့ချခြင်းများလည်းကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။
Trainline.com တွင်တောင်ပိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပေါင် ၁၉.၈၀ ကျသင့်ပြီး Gatwick Express ရထားသည်ပေါင် ၂၈.၃၀ ကျသင့်သည်။
လန်ဒန်ဗစ်တိုးရီးယားမြို့သို့တိုက်ရိုက်ရောက်လိုသောခရီးသည်များသည် Gatwick အမြန်ကို အသုံးပြု၍ သိသိသာသာများသောငွေပမာဏကိုပေးရလိမ့်မည်။
အမြင့်ဆုံးရထားကိုလိုချင်သောသူများသည် Haywards Heath တွင်ဆင်းပြီး London Victoria သို့သွားမည့်ရထားကိုစောင့်နေရမည်။
Brighton နှင့် Kemptown ပါလီမန်အမတ် Lloyd Russel-Moyle တို့က twitter သို့ခေါ်ယူသွားသည်။ 'ဒီအပြောင်းအလဲဟာလန်ဒန်တောင်ပိုင်းနေရာများအတွက်အဓိကဖလှယ်မှုဖြစ်သည့် Brighton မှ Clapham Junction သို့တိုက်ရိုက်ရထားများလုံးဝနီးပါးမရရှိနိုင်ပါ။ '
- လွိုက်ရပ်စယ်လ် -Moyle အမတ် ???? ️‍? (@lloyd_rm) ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၊
အလုပ်သမားအမတ်အားလုံးကသူသည်ပြည်သူ့စိုးရိမ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန် ၀ န်ဆောင်မှုမှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာတွင် 'Brighton မှလန်ဒန်သို့အမြင့်ဆုံးခရီးသည်များသည်တိုက်ရိုက် Gatwick Express သို့မဟုတ် Thameslink ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ် East Croydon, Haywards Heath သို့မဟုတ် Preston Park ကဲ့သို့သောဘူတာများတွင်ပြောင်းရန်လိုလိမ့်မည်' 'ဟုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Brighton တွင်နေထိုင်သောကျောင်းသားများအနေဖြင့်ဤရထားများပေါ်တွင်မှီခိုနေရသောကြောင့်အိမ်မှထွက်ရန်နှင့်အထွတ်အထိပ်ရထားများဖယ်ရှားခြင်းသည်အဓိကပြissuesနာများဖြစ်စေသည်။ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုလည်းဖော်ပြရန်မသင့်ပါ။ Easter အတွက်သင့်အိမ်သို့ကောင်းမွန်သောသာယာလှပသည့်လမ်းလျှောက်မှုကိုကြိုတင်စီစဉ်။ စတင်ပါ။
အဘယ်အရာကို ဦး ထုပ်နှင့်ဂါဝန်အထီးအောက်မှာဝတ်ဆင်ရန်
ကျောင်းသားတစ် ဦး ကဤသို့ဖြေကြားခဲ့သည် - 'ရထားနဲ့သွားလာရမယ့်ဈေးနှုန်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့သူတို့ဘာမှမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကဒါဟာသပဲ။ အခုငါ့ခရီးကပိုပြီးစျေးကြီးတော့မယ်၊ ငါတို့အတွက်အထူးအစီအမံတွေထားသင့်တယ် ''
နောက်ကျောင်းသားတစ် ဦး က 'လေးပတ်ကြာသပိတ်မှောက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးအခုအဲဒီကာလအတွင်းအိမ်ပြန်ဖို့ငွေပိုပေးရမယ်။ ငါ uni ကိုချစ်တယ်။ '
ဒေါသထွက်နေသော Sussex နေထိုင်သူများထံမှလွိုက်ရပ်စယ်လ် - မိုင်းလ်၏တွစ်တာတွင်တုန့်ပြန်မှုများတွင် -